Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguBranka
I-Cottage ikwigadi yethu eluhlaza, kanye embindini weStična kodwa kwangaxeshanye ibonelela ngalo lonke ulwando lwepropathi yethu yabucala. Kufuphi ne-cottage sineegusha ze-camerun ezikwenza uzive ubomi bokwenyani belali.
I-cottage ifanelekile kwiintsapho, abahambi abancinci abanomoya okhululekileyo, abafuna ukunandipha onke amalungelo okuhlala phakathi kweendawo ezintle zendalo.I-cottage incinci, ilula kwaye intle, i-cca 16 sqf.I-cottage ineebhedi, iitawuli , izixhobo zasekhitshini, ifriji, isitovu. Kwi-terrace engaphambili unayo itafile yamatye enezitulo zangaphandle. Igumbi lokulala liyafikeleleka ngezinyuko.
Kufuphi nendlwana, kwipropathi yethu unendawo yokuphumla ebabazekayo yekofu-užitkarnica Jama, apho ungazipholela, utye amashwamshwam, ufumane isidlo sakusasa, usele ikofu emnandi, ibhiya kwaye wonwabe nomoya opholileyo... kufutshane neproparty yethu nawe. kananjalo hava imarike encinane, apho unokuthenga phantse yonke into. Eyona nto ibalulekileyo kwilali yethu yi-monastary yase-Cisterian Stična-worth ukuyibona. Ukutya okumnandi okunombono oluhlaza omangalisayo kunye nombukiso omnandi kakhulu nguLavričeva koča eGradišče nad Stično. Ifikeleleka ngemoto (imizuzu emi-2) kodwa unokuthatha uhambo ukusuka kwindlwana ukuya ngasehlathini(cca 30 min). Ukuba uyathanda ukuphumla ngasemlanjeni, kufuneka ndincome umlambo i-Krka omalunga neekhilomitha ezi-5 ukusuka eStična.
Ungasifumana imini yonke kwifowuni yethu, sikwahlala kufutshane, ke ukuba ufuna nantoni na, siyafumaneka